Amakhukhi nezibalo | Vakashela uHultsfred
umphetho » Amakhukhi nezibalo
Le webhusayithi iqukethe okuthiwa amakhukhi.
Ngokwe-Electronic Communications Act, eyaqala ukusebenza ngomhlaka 25 Julayi 2003, wonke umuntu ovakashela iwebhusayithi enamakhukhi kumele aziswe ukuthi le webhusayithi inamakhukhi, ukuthi lawo makhukhi asetshenziselwa ini nokuthi amakhukhi angagwema kanjani. Ikhukhi yifayela ledatha elincane eligcinwa amawebhusayithi kukhompyutha yakho ukuze bakwazi ukubona ikhompyutha yakho ngokuzayo lapho uvakashela iwebhusayithi. Amakhukhi asetshenziswa kumawebhusayithi amaningi ukunikeza isivakashi ukufinyelela emisebenzini ehlukahlukene. Imininingwane ekukhukhi ingasetshenziselwa ukulandela ukuphequlula komsebenzisi. Ikhukhi ayenzi lutho futhi ayikwazi ukusabalalisa amagciwane ekhompyutha noma enye isoftware enobungozi.
Amakhukhi asetshenziswa njengamathuluzi, isb. ukuze:
- izilungiselelo zesitolo zokuthi iwebhusayithi kufanele ikhonjiswe kanjani (ukulungiswa, ulimi njll)
Nika amandla ukubethela kokudluliswa kwedatha ebucayi ku-Intanethi
- nika amandla ukubuka ukuthi abasebenzisi bayisebenzisa kanjani iwebhusayithi futhi ngaleyo ndlela baqoqe ubufakazi bokuthi iwebhusayithi ingakhiwa kanjani ngokujwayelekile
- Xhumanisa ukutholakala komsebenzisi ekukhangiseni kumawebhusayithi nokuthengiselana kwakhe nge-e njengesisekelo sokubala umholo ku
iwebhusayithi namanethiwekhi esikhangiso
- qoqa imininingwane mayelana nokuziphatha kwabasebenzisi ukuze ujwayele futhi ukhawulele okuqukethwe nokukhangiswa kwamawebhusayithi avakashelwe kulezi zindlela zokuziphatha
Le webhusayithi isebenzisa amakhukhi ukukala ithrafikhi futhi ngosizo lwensiza yewebhu "iGoogle Analytics" esebenzisa amakhukhi, izibalo zabavakashi ziyaqoqwa kuwebhusayithi. Lolu lwazi lusetshenziselwa inhloso yokuthuthukisa okuqukethwe kwewebhusayithi kanye nokuhlangenwe nakho komsebenzisi. Amakhukhi asetshenziselwa ukunikeza umsebenzisi ukufinyelela emsebenzini ukukhumbula ukukhetha kwezwe / ulimi kuze kube yisikhathi esizayo lapho isivakashi sivakashela ngesiphequluli esifanayo. Amakhukhi asetshenziselwa ukukhumbula noma yikuphi ukwenza ngokwezifiso ukutholakala.
Amakhukhi nobunye ubuchwepheshe obugcinwe noma obubuyisa idatha kusuka kwikhompyutha yomsebenzisi bungasetshenziswa kuphela ngemvume yomsebenzisi. Imvume inganikezwa ngezindlela ezahlukahlukene, ngokwesibonelo ngesiphequluli. Kuzilungiselelo zesiphequluli, umsebenzisi angasetha ukuthi yimaphi amakhukhi okufanele avunyelwe, avinjelwe noma asuswe. Funda kabanzi mayelana nokuthi lokhu kwenziwa kanjani esigabeni sosizo sesiphequluli kanye neminye imininingwane bheka http://www.minacookies.se/allt-om-cookies/.
Qaphela ukuthi le webhusayithi isebenzisa amakhukhi ukwenza lula umsebenzisi kube lula nokwenza isebenze ngokugcwele.